नेकपाभित्र बहस : प्रदेश सभा अधिकारमाथि पार्टी हस्तक्षेप ठिक कि बेठिक ? - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नेकपाभित्र बहस : प्रदेश सभा अधिकारमाथि पार्टी हस्तक्षेप ठिक कि बेठिक ? - www.khabardabali.com
नेकपाभित्र बहस : प्रदेश सभा अधिकारमाथि पार्टी हस्तक्षेप ठिक कि बेठिक ?
पुस २९ गते, २०७६ - १३:२९
काठमाडौं । प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै तीन बर्षपछि प्रदेश ३ ले औपचारीक रुपमा आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी पाएको छ । आइतबार हेटौंडामा बसेको प्रदेशसभा बैठकले मतदान प्रकृयाबाट प्रदेशको नाम बागमती र स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
देशको नाममा एउटा मात्र प्रस्ताव बागमती दर्ता भएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाले राखेको प्रस्तावमा नेकपा प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुयाँल, विवेकशील साझाका रमेश पौडेल र शोभा शाक्य, राप्रपाकी रीता माझी र राप्रपा संयुक्तकी रीना गुरुङ समर्थक थिए । प्रस्तावको पक्षमा १ सय ८ मत परेको थियो भने विपक्षमा कुनै मत परेको थिएन ।
यस्तै, स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गर्ने प्रस्ताव दुई तिहाइ बढि मतले पास भएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले दर्ता गरेको प्रस्तावमा कांग्रेस र राप्रपा घटकले समर्थन गरेका थिए । प्रस्तावको पक्षमा १ सय ४ मत परेको थियो भने विपक्षमा तीन मत परेको थियो । विवेकशीलका तीन सदस्यले काभ्रेको धुलीखेललाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
यसअघि राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रदेश सांसद दिपक निरौलाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रतिवेदनसमेत बनाएको थियो । निरौलाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रदेश सभामुखलाई बुझाए पनि प्रतिवेदनमाथि कुनै बहस भएन । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि कुनै छलफल नभई दलहरुभित्रै प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा अनेकन बहस सिर्जना भएको थियो ।
काभ्रेको पक्षमा पनि दुई तिहाइ पुर्याउन नसक्ने र हेटौंडाको पक्षमा पनि दुईतिहाइ पुर्यान नसक्ने अवस्थामा मत विभाजन भयो । संघीयता कार्यान्वयन, संविधान कार्यान्वयनको शुरुको अवस्था भएकोले समयमै कार्यान्वय गर्नु पर्ने नैतिक दवावमा हामी थियौं । हामी आन्तरिक रुपमै विभाजित भएर बस्दा ५ बर्षमा समेत प्रदेशको स्थायी नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । स्थायीरुपले नाम पनि नटुंगिने, राजधानी पनि नटुंगिने स्थिति पैदा भयो । अन्त्यमा केहि सिप नलागेपछि बाध्यताले पार्टीले एउटा सहजिकरण गरिदियो ।
मुख्यत: एक सय १० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै यस मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको थियो । प्रदेशको नाम बागमती राख्ने सवालमा खासै अन्र्तविरोध नभएपनि स्थायी राजधानी तोक्ने सवालमा धेरै पापड बेल्नु परेको थियो ।
बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरुबीच राजधानी काभ्रे वा हेटौंडा कसलाई बनाउने भन्नेमा मत विभाजन भएपछि करिब तीन बर्षसम्म प्रदेशसभा अनिर्णयको बन्दी बन्यो । सत्तारुढ दल नेकपाकै अधिकांश सदस्य हेटौंडाको विपक्षमा उभिएपछि गत पुष १३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेशको नाम बागमती र स्थायी राजधानी हेटौंडा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
नेकपाको सो निर्णयपछि नेकपा नेता राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाई, शालिकराम जमकट्टेल, केशव स्थापित, युवराज दुलाल लगाय अधिकांश सदस्यहरुले तिब्र असन्तुष्टि जायर गर्दै पार्टी छोड्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । उनीहरुले प्रदेश सभाको अधिकारमाथि केन्द्रले ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्र्दै सो निर्णय नसच्याए पार्टीले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने धम्कि दिएका थिए । तर, बालुबाटारमा शिर्ष नेतृत्वसँग छलफल पछि नेताहरु एकाएक आफ्नो निर्णयबाट व्याक भए ।
उनीहरुलाई साथ दिएका अधिकांस सदस्यहरुले नेतामा आएको एकाएक परिवर्तनले आश्चर्यचकित भएका थिए । पार्टी नेतृत्वले गैह्रन्यायीक निर्णय गर्दा दोस्रो तहका नेता चुक्क नबोले पछि पद जोगाउनको लागि नेताहरु खुट्टा लरबराएको आरोप लगाएका थिए । यसै बिषयमा खबर डबलीको तर्फबाट बागमती प्रेदशका आन्तरिक मामिला मन्त्री एंव नेता शालिकराम जमकट्टेल, सम्भाव्य राजधानी अध्ययन समितिका संयोजक दीपक निरौला र प्रदेश सभा सदस्य हिरानाथ खतिवडासँग गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका थिए । जमरकट्टेल, निरौला र खतिवडासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पुस २९ गते, २०७६ - १३:२९ मा प्रकाशित
दोस्रो तहको नेताले खुट्टा कमाउँदा राजधानी हाम्रो हातबाट फुत्कीयो
संघीयताको मर्म विधि, विधान, संविधान, नियम, कानूनको विषयमा हामीले दलको बैठक र प्रदेशसभा र समितिको बैठकमा पटकपटक कुरा उठाएको हो । तर कुनै सुनुवाइ भएन । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीको सचिवालयको बैठकले गरेको निर्णय संविधानको धारा २८८(२)मा भएको व्यवस्था विपरित छ । त्यहाँ स्पष्ट रुपले सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुई तिहाई सदस्यको मतदानबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने भन्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेशसभाको अधिकारमाथि पार्टीले हस्तक्षेप गर्न हुने थिएन । तर, किन हो मैंले बुझेको छैन ।
अझ बाहिर त २ र ३ नं. प्रदेशको पुनर्सरचना गर्न तत्कालको लागि राजधानी हेटौंडा कायम गरेको भन्ने तर्कपनि आइरहेको छ । प्रदेशसभाको बहुसंख्यक सदस्यहरु हेटौंडाको बिपक्षमा थिए । तर, पार्टीको हस्तक्षको कारण केहि गर्न सकिएन । दीपक निरौंला जीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि सदन र दलको बैठकमा छलफल हुँदा बहुसंख्य सदस्यहरु हेटौंडाको विपक्षमै मत जारी गरेका थिए । त्यसमा राजेन्द्र पाण्डेलगायतले हामीलाई साथ दिएका हुन् । तर, अन्तिम अवस्थामा किन खुट्टा कमाए थाहा भएन । मैले पटक–पटक प्रदेशको नाम र राजधानी उपयुक्त छैन, यसले कुनै पहिचान दिँदैन भएको थिएँ । यसमा ठुलो गल्ति दलको नेता तथा सभामुखबाट भएको छ । उहाँले नै प्रतिवेदन गुपचुप राखि पार्टी नेतृत्वको मुख ताकेर बस्नुभयो ।
मत विभाजित भएपछि पार्टीले हस्तक्षेपभन्दा पनि सल्लाह दिएको दलिल पेश गरेको छ । यसमा पार्टीबाट प्रकृयागत त्रुटि भएकै हो । केन्द्रीय राजधानी पनि यहि प्रदेशमा भएको हुनाले केन्द्रले चासो राख्नु ठिक भएपनि हस्तक्षेप गर्नु ठिक भएन । यसले पार्टीलाई नै असर गर्छ ।
पार्टी नेतृत्वबाट हस्तक्षेप गरेको भएपनि दोस्रो तहको नेताले खुट्टा टेकेको भए राजधानी हेटौंडा पुग्ने थिएन । यसमा दोस्रो तहका नेताहरुले खुट्टा कमाएकै हो । नुवाकोटको पक्षमा जनमत नभए पनि काभ्रेको पक्षमा बहुमत सदस्यहरु उभिएका थिए । सबैभन्दा गल्ति बागमती प्रदेशका नेताहरुले खुट्टा कमाएकोले यस्तोस्थिति उत्पन्न भयो । नेताहरुले उपयुक्त ठाउँमा राजधानी कायम गर्नुभन्दा पनि मन्त्री, सदस्यहरुको पद जोगाउन लागे । हामी एकजुट भएर मत जायर गर्न सकेको भए पार्टीले पनि कारवाही गर्न सक्ने थिएन । अहिलेलाई यो ऐतिहाँसिक निर्णयबाट हामी चुक्यौं । यसको असर अहिले होइन पछि भोग्ने छौं ।
(खतिवडा बागमती प्रदेशका सदस्य हुन्)